ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Beihai Composite Materials Co. , Ltd.
BEIHAI AFP dept.is သည်အမြှုပ်သတ္ထု၏ပစ္စည်းများကိုပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်သုတေသနပြုလုပ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဆက်စပ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ထုတ်ကုန်၏အသုံးချအင်ဂျင်နီယာနှင့်ဆက်စပ်နည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုတို့ကိုတစ် ဦး တည်းလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ BEIHAI AFP ၏အဓိကထုတ်ကုန်သည် Aluminium Foam Panel ဖြစ်သည်။ ယခုကုမ္ပဏီသည်အလူမီနီယမ်အမြှုပ်များထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အသုံးချခြင်းတို့တွင်ကိုယ်ပိုင်မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပိုင်ဆိုင်သည်။
၁။ အလူမီနီယံထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရာတွင်အထူးပြုလုပ်သား ၂၁၀၀ ရှိသောစက်ရုံ ၃ ရုံ
2. တစ်နေရာတည်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်သောကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ၁၈ ခုကျော်နှင့် ၂၆ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံ
၃။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံးကိုနိုင်ငံတကာအရည်အသွေးစံနှုန်းများနှင့်အညီထုတ်ကုန်များကိုအရှေ့တောင်အာရှ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အရှေ့ဥရောပ၊ တောင်အမေရိက၊ မြောက်အမေရိကနှင့်အခြားပြည်ပဈေးကွက်ကြီးများသို့တင်ပို့ရောင်းချသည်။
4. R&D အဖွဲ့နှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာများသည်စံထုတ်ကုန်များနှင့်စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်များအားလုံးကိုထိထိရောက်ရောက်ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်။
၆။ ပို့ကုန်များသည်သမိုင်းကြောင်းဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးရှိခဲ့ပြီးအတွေ့အကြုံကြွယ်ဝပြီးမှတ်တမ်းတင်အသိအမှတ်ပြုစာရွက်စာတမ်းများနှင့်တင်ပို့မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကိုအကျွမ်းတ ၀ င်ရှိသည်။
၇။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်မျိုးစုံသောငွေပေးချေမှုပုံစံများအတွက် ၀ ယ်လိုအားနှင့်အညီ L/C, T/T, Western union, paypal စသည်
၈. ၂၄ နာရီ online pre-sales နှင့် after-sales service တို့ဖြင့်သင့်အားအချိန်နှင့်တပြေးညီတုံ့ပြန်မှုပေးနိုင်ရန်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်စက်မှုလုပ်ငန်း၌ခိုင်ခံ့သောနည်းပညာအဖွဲ့ရှိသည်၊ ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွေ့အကြုံရှိသောကျွမ်းကျင်မှု၊ ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းအဆင့်၊ အရည်အသွေးမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်အသိဥာဏ်ပစ္စည်းကိုဖန်တီးသည်။
ကုမ္ပဏီသည်အဆင့်မြင့်ဒီဇိုင်းစနစ်များနှင့်အဆင့်မြင့် ISO9001 2000 နိုင်ငံတကာအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကိုအသုံးပြုသည်။
ကုမ္ပဏီသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စက်ကိရိယာများ၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအင်အား၊ ခိုင်မာသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစွမ်းရည်များ၊ နည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုကောင်းများထုတ်လုပ်ရာတွင်အထူးပြုသည်။
၎င်းသည်ရောင်း ၀ ယ်မှု (သို့) ရောင်း ၀ ယ်ပြီးနောက်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့အားသင်၏ထုတ်ကုန်များကိုပိုမိုလျင်မြန်စွာအသိပေးနိုင်ရန်အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးလိမ့်မည်။